Free Thinker: မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ (၄)
ငါ့စာဖတ်၍၊ မမြတ်တိုင်စေ မရှုံးစေသား၊ ပျင်းပြေနှစ်ခြိုက် တွေးဖွယ်ထိုက်ရာ၊ တစ်ပိုဒ်တစ်လေ တွေ့ငြားပေမူ၊ စာပေကျေးကျွန် ငါ့ဝတ်ပွန်ပြီ၊ ငါမွန်အမြတ် ငါအတတ်ဟု၊ စာဖတ်သူပေါ် ခေါင်းကိုကျော်၍၊ ငါသော်ဆရာ မလုပ်ပါတည်း။ ။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်
Bitter Life (26)
Build Your Future (10)
Construction Safety Handbook (57)
Emergency handbook (7)
Farm Safety (9)
Fridge and Aircond (6)
Gas Pipe Line (5)
Greenery Singapore (2)
Living in Singapore (63)
My Articles (364)
Myanmar Culture (10)
Myanmar Transitional Platform (30)
PPE Book (3)
Welding Technology (5)
Working in Singapore (37)
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ (၄)
(၅) စင်ကာပူကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် - ကိုမင်းသူ
ကျွန်တော့်နာမည် ကိုမင်းသူပါ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကနေ ရူပဗေဒနဲ့ကျောင်းပြီးပါတယ်။ ကျွန်တော် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက် စင်ကာပူအစိုးရကပေးတဲ့ ပညာသင်ဆု ရလို့ ကိုသိန်းသန်းဝင်းတို့နဲ့အတူ Master of Public Administration ကို ၂ နှစ်တက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ထဲက မန်းစည်ပင်နဲ့ သင့်တော်ရာရာတွေကို ရွေးပြောပါမယ်။
ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေရင်း ရင်ဘတ်အောင့်လာလို့ အနားမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကို သွားပါတယ်။ သူတို့ ချက်ချင်းလုပ်ကိုင် ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်နိုးလာတော့ ကုန်ကျစရိတ်တောင်းတဲ့စာရွက်ရောက်လာတယ်။ ဆေးရုံတက်တာတောင် မဟုတ်သေးဘူး။ စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာပါဘဲ။ စုစုပေါင်း ဆယ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က မြန်မာငွေ ဆယ်သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက သူတို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်က ကောင်းတယ်။ မြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုန်ကျစရိတ်လည်း အရမ်းကြီးတယ်။ ဆေးကုသစရိတ်က အရမ်းမြင့်တဲ့အတွက် အလုပ်လုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ အာမခံယူထားဘို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍ အာမခံယူမထားလို့ရှိရင် ရှာထားသမျှပိုက်ဆံ ခဏလေးနဲ့ ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက အရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဆေးလိပ်မသောက် တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ရှင်းတဲ့အခါ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ရှင်းရတယ်။ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေက ရှုပ်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒါကို ကိုင်တွယ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ကလည်း အတော့်ကို ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ဆေးရုံကြီးတွေက အရမ်းကောင်းနေပေမဲ့ ဈေးက မတရားကြီးနေလို့ လူတွေအနားမကပ်နိုင်ရင်လည်း ဒီကျန်းမာရေးစနစ်ကို ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဥပမာ ဂျပန်ဆိုပါတော့၊ ဂျပန်က ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် အရမ်းကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကော်ပီကူးချလို့မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဂျပန်က လူနေမှုစနစ်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်က ရာသီဥတု၊ လူနေမှုစနစ်တို့ တူမှမတူပဲကိုး။
အဲဒါကြောင့် လိမ္မော်သီးနဲ့ ပန်းသီးဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲလို့ နှိုင်းယှဉ်သလို နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး။ ကာလံဒေသံပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ဒေသအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားလို့ ပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့က အမေရိကားမှာ Obama care ကိုပြင်ဘို့ အဆိုတွေတင်သွင်းကြတယ်။ အဲဒီမှာ NewYork Time က ဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးတယ်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ အမေရိကားကို စင်ကာပူလိုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ တဲ့။ စင်ကာပူဟာ နိုင်ငံသေးသေးလေးဖြစ်ပေမဲ့ အမေရိကားက သူတို့ကျန်းမာရေးစနစ် ကောင်းလားမကောင်းလား ကြည့်တဲ့ အခါ စင်ကာပူကို လှမ်းကြည့်ရတယ်။ ဂျပန်ကလည်း ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူကိုလာ လေ့လာသင်ယူမှုတွေ လုပ်ရတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် စင်ကာပူဟာ ကျန်းမာရေးမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ benchmark ဖြစ်လာတယ် ပေါ့။ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံ တွေအတွက် စင်ကာပူဟာ ကျန်းမာရေးစနစ်မှာ တခြားနိုင်ငံတွေက စံထားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရက သူ့နိုင်ငံသားတွေကို ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်။ နောက် အာမခံစနစ်တွေ ထားပေးတယ်။ ဥပဒေအရ ဆေးစစ်တာထက် ဆေးရုံတက်တာက ပိုသက်သာတယ်။ ဒါကြောင့် အာမခံကုမ္ပဏီတွေကလည်း ဆေးစစ်တာထက် ဆေးရုံတက်တာကို ပိုအားပေးတယ်။
ဆေးရုံကြီးတွေ ဟီးထနေအောင်၊ အရမ်းကောင်းအောင်ဆောက်ထားပေးမဲ့ အစိုးရအနေနဲ့က ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ၅% ပဲ ပေးရ တယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီဆေးရုံကြီးတွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ လူတော်တော်များများ သုံးနိုင်တယ်။ သုံးနိုင်အောင် လို့ လုပ်ပေးထားတယ်။
စကင်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးစရိတ်ကို GDP ရဲ့ ၁၀% သုံးတယ်။ အမေရိကားမှာဆို GDP ရဲ့ ၁၇% ကို သုံးရတယ်။ အဲဒါတောင်မှ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိတဲ့၊ ရလဒ်ကောင်းထွက်တဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ကို မရဘူး။
စင်ကာပူဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလားလို့ ပြန်ကြည့်ရအောင်။ ဒီဟာကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ ကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားတာပါ။
၁။ ကလေးမွေးနှုန်း - စင်ကာပူမှာက လူတိုင်းအလုပ်လုပ်နေရတော့ ကလေးသိပ်မမွေးနိုင်ကြဘူး။
၂။ ပျမ်းမျှသက်တမ်း -
၃။ ကလေးအသေမွေးဖွားနှုန်း -
၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သေဆုံးနှုန်း -
ကြည့်လိုက်ရင် စင်ကာပူဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံအတော်များများရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတယ်။ WHO ရဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ အစီရင်ခံစာမှာ စင်ကာပူဟာ နံပါတ် (၆) နေရာမှာရှိပါတယ်။ ၂၀၁၆ ရဲ့ Bloomberg ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေး စနစ်မှာ စင်ကာပူက နံပါတ် (၂) ရှိတယ်။
မြန်မာပြည်က ဘာဆိုးသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အချက်အလက်တွေ တိတိကျကျမရှိဘူး။ ခုနက ကိုသိန်းသန်းဝင်း ပြောတဲ့ evidence base action တွေ ယူဘို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ နှိုင်းယှဉ်စရာ အချက်အလက်တွေ အရမ်းအားနည်းတယ်။ မန်းစည်ပင်ကို ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်မှာ baseline data တွေကို စကောက်စေချင် ပါတယ်။ အဲဒါမှ ကျွန်တော်တို့က လက်ရှိ ကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သိမှာ။ ဘာအချက်အလက်မှမရှိတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းမသိ။ ဘယ်အဆင့်ရောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ ရည်မှန်းလို့လည်းမရ။
သူတို့လုပ်တဲ့အခါ စည်းတွေစနစ်တွေက တော်တော်ကောင်းတယ်။ အစိုးရနဲ့ လူထုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေရင် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကိစ္စတော်တော်များများကို အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့လုပ်လို့ရမဲ့ Smart nation ထူထောင်ဘို့ လုပ်ရမယ်။ စနစ်ကောင်းတဲ့အခါ လုပ်ရလွယ်တယ်။ မြန်တယ်။ တော်တော်အကျိုးရှိတယ်။
နောက် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု။ ဒီမှာ သူငယ်ချင်းတို့၊ အသိတို့ရယ်လို့မရှိဘူး။ မှားတယ်ဆို ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် အရေးယူတယ်။ နောက်ပြီး တာဝန်ခံမှု။ ဥပမာ - ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ကူးစက်ရောဂါရှိလာပြီဆို အဲဒီဆေးရုံအုပ်၊ ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့ စသဖြင့် နှုတ်ထွက်ပေးရတယ်။ နားလည်မှုတို့ဘာတို့ မရှိဘူး။ အဲဒါလေး တော်တော်ကောင်းတယ်။
အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်အတိုင်းပဲ ဆေးရုံကိုပေးတယ်။ ကျန်တာကို ဆေးရုံက သူ့ဘဏ္ဍာငွေ သူ့ဘာသာ သူရှာ၊ သူ့ဘာသာ စီမံခန့်ခွဲရတယ်။ ဆိုတော့ စင်ကာပူအစိုးရမှာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပိုတယ်။ ပိုတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်တယ်။
ဆေးရုံကြီးတစ်ခုဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့ သူတို့က ရပ်မနေဘူး။ How can we do better. ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် လုပ်မလဲ။ စရိတ်စကတွေ လျှော့ချလို့ရမလား။ ဒီဆေးရုံမှာ နှလုံးရေးဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထူးကုမရှိဘူး။ ဒါဆို နှလုံးရောဂါ အထူးကုဌာနတစ်ခု ထပ်ဖွင့်မလား။ ဆိုတော့ သူတို့က သူတို့စနစ်ကို အမြဲပြန်လည်ဆန်းစစ်နေပြီး အမြဲတိုးတက်အောင် လုပ်နေတယ်။
သူတို့က ရပ်မနေဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုလုံးကို learning organization အဖြစ် အမြဲကြိုးစားနေတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ အမြဲထက်မြက်နေစေဘို့ တစ်နှစ်ကို နာရီတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး အစိုးရက ပိုက်ဆံပေးပြီး သူတို့ကို သင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းတယ်။ ဥပမာ တစ်နှစ်ကို နာရီ ၆၀ သင်တန်းချိန်ပေးထားတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီအထဲက နာရီ ၂၀ ကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတက်။ တခြား နာရီ ၄၀ ကို ကြိုက်တဲ့သင်တန်းတက်။
ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း အဲဒီအစီအစဉ်ရှိတယ်။ International Civil Service ဆိုပြီး အမြဲလေ့လာသင်ယူနေရတယ်။ လူဟာ မလေ့လာ မသင်ယူတော့ဘူးဆိုရင် ရပ်သွားတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ အဲသလို တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေတာတွေကို လေ့လာနေဘို့လိုတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်က ရပ်နေရင် သူများတွေကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်မှာ ပြတ်ကျန်ခဲ့မှာပဲ။ အဲဒီအတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ လိုက်ပြေးနေရမယ်။ စင်ကာပူအစိုးရက ဘာကောင်းသလဲဆိုတော့ အဲသလို လိုက်ပြေးနေအောင် စီမံထားတယ်။ နောက်က ပံ့ပိုးမှုတွေလည်း အများကြီးပေးတယ်။
ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ Change management လုပ်ချင်ရင် learning organization ဖြစ်ဘို့ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ Learning organization ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ဟိုသင်တန်းတွေတက် ဒီသင်တန်းတွေတက်နဲ့ လက်မှတ်တွေ လျှောက်ယူ နေရုံနဲ့မရဘူး။ တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင် လေ့လာနေရမယ်။ သင်တန်းတက်ရုံသာမက ရလာတဲ့အသိပညာတွေ ကို လက်တွေ့အသုံးချရမယ်။
သူတို့အရည်အချင်းပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ အရင်က အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကို Stat board အနေနဲ့ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး မင်းကဒါလုပ်၊ မင်းကဒါလုပ်ဆိုပြီး တာဝန်တွေသီးခြားပေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာ decentralization ပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် တော်တော် အတုယူစရာကောင်းတယ်။
ကျွန်တော့်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်အကြောင်း အတိုချုံ့ပြောပါဆိုရင်လည်း ပြောလို့ရတယ်။ သူတို့စနစ်က နည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲဝိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်ပဲ။ စင်ကာပူကျန်းမာရေးစနစ်အကြောင်း အကျယ်တ၀င့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Carry for All People ဆိုတဲ့စာအုပ် online မှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်။ Policy အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ Affordable Health Care ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို download လုပ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိစင်ကာပူအစိုးရကျင့်သုံးနေတဲ့ စနစ်တွေ အဲဒီအထဲမှာပါတယ်။ အဓိကက ဈေးကွက်စီးပွားရေးကိုအခြေခံတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမယ်။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးကို အခြေခံတော့ စင်ကာပူကအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေဟာ အပြင်ကုမ္ပဏီတွေက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ လစာ မကွာဘူး။ မကွာအောင်လို့ လိုက်ပေးတယ်။ နောက်ပြီး အစည်းအဝေးတို့၊ ကွန်ဖရင့်တို့သွားတက်တဲ့အခါ ရလာတဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ဆယ်ဒေါ်လာထက်ကျော်ရင် ကုမ္ပဏီကို ပြန်ကြေငြာပေးရတယ်။ ၁၅ ဒေါ်လာကျော်သွားရင်တော့ ရုံးကိုပြန်လှူရတယ်။ ကိုယ်ယူထားလို့ မရဘူး။
စင်ကာပူကျန်းမာရေးစနစ်ရဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုပြောရင် အဓိက သုံးမျိုးရှိတယ်။ အစိုးရရယ်၊ ပုဂ္ဂလိကရယ်၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းရယ်။ ဒီသုံးခုဟာ သေသေချာချာ ချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက် နေသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် story လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြပါမယ်။ နာမည်က အသားကင်တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းရဲ့ ရာဇ၀င်တဲ့။
၂၀၁၄ မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ MRT (ရထား) အောက်က လမ်းတစ်ခုမှာ သွားနေရင်း အသားကင်တုတ်ချောင်း တစ်ချောင်းတွေ့တယ်။ သူလမ်းလျှောက်တာ ၂ ရက်ရှိပြီ။ တုတ်ချောင်းက ရှိနေတုံးပဲ။ ဒီတော့ နောက်တစ်ပတ် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့စည်းဝေးပွဲမှာ သူကပြောတယ်။ ကျမ ဒီလမ်းကိုလျှောက်တာ နှစ်ရက်ရှိပြီ။ ဒီအသားကင်တုတ်ချောင်းကို ဘယ်သူမှ လာမသိမ်းဘူး။ ရှင်တို့တွေ အလုပ်မလုပ်ကြဘူးလား မေးတယ်။
ဒီတော့ အမတ်က NEA (National Environment Agency) ကို ချက်ချင်းဖုံးဆက်တယ်။ ဒီလမ်းမှာ ဒီတုတ်ချောင်း ဘာလို့ ရှိနေရသလဲ။ ဒီတော့ NEA က ပြန်ဖြေတယ်။ ဟာ ဒါ ငါတို့အပိုင်မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့နဲ့ဆိုင်တာက မြက်ခင်းကနေ လမ်းနယ်စပ် အထိပဲ။ ဆိုတော့ ရထားလမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ LTA (Land Transport Authority) ကိုလှမ်းဆက်ပြန်တယ်။ LTA ကလည်း ငါတို့နဲ့ ဆိုင်တာက ကွန်ကရစ်၊ ကတ္တရာခင်းထားတဲ့လမ်းပဲ။ တခြား လူသွားခြေလမ်းတွေ ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။ ဖြစ်ပြန်ရော။
နောက်ဆုံးကတော့ Park Connector ကို ရောက်သွားတယ်။ ဖြစ်ပုံက Park Connector က အဲဒီနေရာတွေကို သုံးရက်တစ်ခါ အမှိုက်ရှင်းတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အမျိုးသမီးလျှောက်တာက ပထမနှစ်ရက်ဖြစ်နေတယ်။ အမှိုက်က တတိယနေ့မှ ရှင်းမှာ။
NEA တို့ LTA တို့ကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အပြင်ကန်ထရိုက်တာကို ပိုက်ဆံပေးခိုင်းတာ။ ဆိုတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်တွေမတူကြဘူး။ နောက်ဆုံး ဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အမျိုးသားနေ့မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောရတဲ့ထိ ဖြစ်သွားတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ စင်ကာပူက No round door policy ကို ကျင့်သုံးတယ်။ No round door policy ဆိုတာက စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်အစိုးရဌာနကိုပဲ မေးခွန်းမေးလိုက်မေးလိုက်၊ အဲဒီအစိုးရဌာနက ဒါ ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောလို့မရဘူး။ သူတို့ဟာ သူတို့ သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနကို ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးရတယ်။ အဲဒါ No round door policy.
အခု အဲဒီ No round door policy ကိုကျင့်သုံးတာ ဆယ်နှစ်ရှိပြီ။ ဒါပေမဲ့ခုထိ အစိုးရဌာနတွေက လက်ရှောင်နေတာတွေ ရှိနေ သေးတယ်။ အချင်းချင်းလက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြပါဆိုပြီး ၀န်ကြီးချုပ်က မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောသွားတယ်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် လက်တွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း အလုံးစုံကျန်းမာရေး ဆို လုပ်ရတယ်။ ဒီအခါ လူတွေတင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့လုပ်နေလို့ မရတော့ဘူး။ ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ ၈၀% က တိရစ္ဆာန်တွေဆီက ရလာတာ။ ဥပမာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး၊ SARS, ခွေးရူးပြန် စသည်။
ဆိုတော့ စင်ကာပူက One health ကို ၂၀၁၂ မှာ အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ပေးတယ်။ NEA က ပတ်ဝန်းကျင် environmental health ကိုလုပ်တယ်။ AVA က စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူ ရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်တယ်။ သူတို့က စင်ကာပူကိုသွင်းလာတဲ့ အစားအသောက်အတွေမှာ အဆိပ်အတောက်။ ရောဂါ ကင်းမကင်း စစ်တယ်။ ဈေးတွေသွားပြီး ဈေးမှာရောင်းနေတဲ့ငါးတွေ လတ်မလတ် စစ်တယ်။
အားလုံး ဌာနအလိုက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ One health အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။ ဥပမာ - အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် မှာ လူ ၅၀ လောက်ဆေးရုံတက်ရတယ်။ အထက်လှန်အောက်လျှောဖြစ်တယ်။ မေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့တွေဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ နန်းကြီးသုပ်စားခဲ့မိတယ်။
စင်ကာပူလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဆေးရုံတွေက လူနာတွေကို ကျန်းမာလာအောင် ပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်။ NEA က စားသောက် ဆိုင်တွေကို လိုက်စစ်တယ်။ စင်ကာပူမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းတဲ့ အစားအသောက်ဆိုင်မှန်သမျှ NEA မှာ မှတ်ပုံတင်ရတယ်။ NEA သည် အဲဒီဆိုင်တွေကို အချိန်မရွေး ၀င်စစ်လို့ရတယ်။ စစ်လည်းစစ်တယ်။ ဆိုင်တွေမှာ A, B, C, D ဆို ရေးထားတာ တွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ သူတို့က တစ်လကို နှစ်ကြိမ် ဆိုင်တွေကိုလိုက်စစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်တွေအလိုက် A,B,C, D ပေးတာ။ A က အကောင်းဆုံး။ D က အဆိုးဆုံးပေါ့။
ဘာတွေစစ်သလဲဆိုတော့ ခြင်၊ ယင်၊ ကြွက်၊ ငှက်တွေစစ်တယ်။ အသားငါးတွေ လတ်မလတ် စစ်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာ စတာတွေ စစ်တယ်။ AVA က ကျတော့ ကြက်ဥတို့၊ ခေါက်ဆွဲတို့၊ ကြက်သားတို့စတာတွေကို နမူနာယူပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်တယ်။ တကယ်လို့ ကြက်ဥတွေမှာ ရောဂါပိုးပါလာခဲ့ရင် အဲဒီကြက်ဥတင်သွင်းတဲ့သူကို ချက်ချင်းပိတ်ပြီး အရေးယူတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခွင့်အာဏာလည်း သူတို့ကို ပေးထားတယ်။
မန်းစည်ပင်ကို ဒီကပြန်သွားတဲ့အခါ အဲဒီလိုအဖွဲ့မျိုး ဖွဲ့ပါ၊ လုပ်ပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခြင်၊ ယင်၊ ကြွက်တွေ ထိန်းဘို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီအကောင်ပလောင်တွေ ထိန်းချုပ်တာ၊ နှိမ်နှင်းတာ မရှိသေး ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက အများပိုင်နေရာတွေ ဆေးလိပ်သောက်တာ ကန့်သတ်တယ်။ အိမ်တွေမှာ ခြင်လောက်လန်းတွေတွေ့ရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဒဏ်ရိုက်တယ်။ လမ်းမှာ အမှိုက်ပစ်ရင် ဖမ်းတယ်။ ဒဏ်ရိုက်တယ် စတာတွေ လုပ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဘို့ ဥပဒေတွေ လိုပါတယ်။ လုပ်တာအားလုံးသည် နိုင်ငံအတွက်လုပ်တာ။ တရားဥပဒေအတွင်းကနေပဲ ဆောင်ရွက်လို့ ရပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကို ဥပဒေက mandate ပေးတယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့တွေက ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေ ဆောင်ရွက်ရတယ်။
စင်ကာပူမှာ အဲဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့ National Environment Agency Act, Infectious Diseases Act ဆိုတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေအတိုင်း လိုက်တာဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်မရွေး အကူအညီပေးပါမယ်လို့ ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
Posted by အေးငြိမ်း at 11:28 PM
ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အစိုးမရခြင်းကြောင့် ဒုက္ခ...
စင်ကာပူမှ စနစ်များအကြောင်း Presentation Slides_lin...
1951 Factory Act (English)
ကျောင်းသူကျောင်းသား တူတူမကလေးများအတွက် နှစ်ကူးလက်ေ...
လူရိုင်းတို့၏တိုင်းပြည် - ၂
လူရိုင်းတို့၏တိုင်းပြည် - ၁
ကျွန်ုပ် တောထိုင်အိမ်သာလုပ်ခြင်း အကြောင်း
Safety Officer တစ်ဦး၏ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင် ...
ကျွန်တော်သုံးဖြစ်တဲ့ website တွေ
Free Dhamma Download